China Nonwoven Maka ụlọ ọrụ ndozi na ndị nrụpụta | ShiningPlast
4-Ply Synthetic Roofing Roolaying
3-Ply Synthetic Roofing Roolaying
Kechie akwa PP / PE
3-Ply House Kechie
Kechie 2-Ply House
Ihe Mgbo Na-Ewu Egwu
Nnukwu reatlọ Na-Ewu Ewu
PP / PE Ejiri akwa
Poly Otu oru Poly
Nnukwu Ọrụ Poly Tarp
Mgbakwunye Poly Poly Poly
Friji Greenhouse Fabric
Mpempe akwụkwọ Leno Scaffold
Ejiri PP Weet Mat
Blanket mkpuchi ihe
Nonwoven N'ihi Landscaping
Nonwoven Maka Ọrụ Ugbo
Nonwoven Maka Horticulture
Akpa Nonwoven / PP / PVC / PE / EVA
Mkpuchi ọdọ mmiri
Ihu ihu balcony
Ngwongwo Mgbochi Ọrịa
PP Spunbond na-abụghị nke a kpụrụ akpụ maka akwa niile
Ihe nkpuchi mkpuchi nke PP Spunbond ndị na-abụghị ihe mkpuchi maka mkpuchi nke ikewapụ Gowns
Anyị nwere ahịrị 6 nke PP spun-bonding maka mmepụta akwa na-abụghị nke a na-eji ikike iji mepụta akwa na-abụghị nke a na-acha na ụcha dị iche iche na nha 8 ruo 250gsm na 3.2m (nke kachasị) n'obosara, ike kwa afọ ruru 12,000 tọn.
Ibu ibu: 10-250gsm
Ihe: SpP jikọrọ PP (SBPP)
Ụdị: S, SS
Agba: Agba ojii ma ọ bụ Panton
Akara: Akpa Segha Shekwụ / Mpempe akwụkwọ / Hoed Hood.
ShiningPlast gbadokwara anya na imepụta akwa a na-eji edozi ahịhịa n’afọ. Ọ na - eme ka osisi gị kpoo ọkụ ma nwee ike iku ume. Ọzọkwa, ọ na-egbochi ata ah u ghara ito nke ọma. Uwe a na-eji ahịrị ahịhịa / ahịhịa na - adịghị mma nwere ike siri ike, nkwụsi ike na njiri mmiri ọpụpụ mara mma. Ọzọkwa ọ nwere oke permeability ma na-anọgide na ike maka ogologo oge ojiji. ShiningPlast nonwoven nwere ọnụnọ eriri ọbụna nke ukwuu ma ị ga - enwe mmetụta dị iche iche dị na akwa.
Anyị na-emepụta ngwaahịa ndị eji arụ ọrụ dịka akwa akwa hydrophilic, akwa ndị na-abụghị nke a kpara akpa, akwa ndị na-abụghị nke a kpara akpa, ọgwụ ndị na-abụghị nke a kpara akpa, akwa ndị na-abụghị ndị a kpara akwa wdg; anyị na-emepụta ihe mkpuchi na-abụghị nke a kpara akpa, mkpuchi nchebe ntu oyi, akwa nchịkwa igbo, akwa anwụ, akpa nri, na akpa mkpụrụ eri wdg. Ogo akwa anyị kachasị nwere ike ịbụ mita 20 site na njikọta ultrasonic na ngwakọta gluu, nke nwere ike ịmeju afọ nke ugbo na ebe ịta nri.
· Ezumike Ubi
· Mkpuchi Osisi
· Cover Tomato
· Mkpuchi mkpuchi
· Mkpuchi Nchedo Nzuzo
· Siri ike na inogide:
Uwe a na-acha uhie uhie ShiningPlast dịgide adịgide ma sie ike. Anyị nwekwara ike iwepụta ụdị SS makwa.
· Ekele Dị Mkpa:
Ìhè n'obosara na-eme ka ọ dị mfe iburu.
.Himmụọ iku ume:
Uwe a na-eji akwa ShiningPlast nwere WVT dị mma nke ukwuu. Osisi ndị ahụ nwere ike iku ume nwayọ.
UV anyị lebara anya, na-eme ka ShiningPlast Breathable Roofing kwụsie ike n'okpuru mkpughe UV ogologo oge.
Nke gara aga: Nonwoven Maka Horticulture
Osote: Lumber Warp / Hood
Ngwongwo ahịhịa na-abụghị Nonven
Ime ụlọ 902, Nkeji 23 nke Shuiyue Cheng Plaza, Nke 189 Zhengyang Middle Road, Mpaghara Chengyang, Qingdao, China
Ọrụ Ntaneti 24/7
Ọrụ ndị ahịa anyị n'ịntanetị 24/7 ga-aza ajụjụ gị ma ọ bụ ajụjụ ozugbo. Ọ bụrụ n’ịhapụ anyị ozi gị site na ozi-e, anyị ga-alaghachikwute gị n’ime elekere iri na abụọ. Daalụ.